Nagarik Shukrabar - छ्याङ्गै हिमाल
आइतबार, ०२ मङि्सर २०७५, ०४ : ०३ | मनोज घर्तीमगर
पोखरा भन्ने बित्तिकै सबैको मनमा एउटा आकृति बन्छ—फेवातालमा माछापुच्छे« हिमालको छाया खेलिरहेको । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो तस्बिर हेर्न त पाइँदैन तर, टे्डमार्क नैै बनेको छ हिमाल पोखराको । हिमाल जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला कहाँ देखिन्छ र ? वातावरण प्रदूषण भएकाले उहिलेजस्तो जुनसुकै मौसममा छ्याङ्ग खुल्दैन हिमाल । अघिल्लो वर्ष भदौको दोस्रो हप्ता नै खुलेको हिमाल यो वर्ष पहिलोपटक कात्तिकको दोस्रो साता खुल्यो । पोखराले निख्खर हिमाल हेर्यो र हिमालले पोखरा । यतिबेला भने दिनदिनै हिमालले बादलको पर्दा हटाएर पोखरालाई हेर्न थालिसकेको छ ।
हिमाल नेपालका अरु धेरै डाँडाबाट समेत देखिन्छ । तर, पोखराबाट जसरी हिमालसँग आँखा जुधाउन अन्तबाट मुस्किल छ । घुमन्तेहरु ‘प्याराडाइज’ पोखरा आउँदा हिमाल खुलेन वा देख्न पाइएन भने त्यो यात्रा सार्थक हुँदैन । कात्तिक पहिलो साता नेपाल पोखरा घुम्न आएका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरीले सराङ्कोटबाट हिमाल नदेखेपछि ठट्टा गरे–‘हिमालमा पनि मोदीजीले नाकाबन्दी लगाएछन् कि क्या हो ?’
येचुरी पोखरा हुँदा हिमाल खुलेको थिएन । कात्तिक दोस्रो सातादेखि भने हिमाल खुलेको छ । भर्खरै सकिएको पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेटका बेलासमेत माछापुच्छ्रेले जादु देखायो । उहिले वातावरण खासै प्रदूषित थिएन, जतिबेला पनि हिमाल देख्न पाइन्थ्यो । आजभोलि भने दिन जुर्नुपर्छ । त्यसो त हरिया डाँडापाखा नेपालका जुनसुकै ठाउँमा पनि छन् ।
‘जब हिमाल खुल्न थाल्छ तब सौन्दर्य पारखी पोखरा भित्रन थाल्छन्’ ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन टान पोखराका उपाध्यक्ष सुशील पौडेल भन्छन्, ‘हिमाल खुल्न सुरु हुनु भनेको पोखरा घुम्ने मौसम सुरु हुनु हो ।’
हिमाली श्रृङ्खला, हिमाल र पोखरासँग धेरैथरी विशेषता जोडिएका छन् । त्यसैले हिमाल खुल्नु सुरु हुनुको खास अर्थ हुन्छ पोखरामा । पोखराबाट माछापुच्छे« हिमालसम्मको हवाई दुरी ३३ किलोमिटर मात्रै हो । यति अग्लो हिमाल र यति नजिकको सहर विश्वमा विरलै भेटिन्छ भन्छन् पर्यटनकर्मी । ‘संसारका सबैभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये ३ यहीँबाट देखिन्छन् धौलागिरि, अन्नपूर्ण र मनास्लु’ पर्यटनविद् झलक थापा भन्छन्, ‘८ हजार मिटरभन्दा अग्ला चुचुरा यति संख्यामा विश्वको अन्य कुनै सहरबाट देखिन्न । यो पोखराको महत्वको विषय हो ।’
पोखरा खाल्डोबाटै देखिने हिमालको सूची माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण अनि धौलागिरि र मनास्लुमा टुंगिँदैन । लस्कर लामो छ । पश्चिमबाट सुरु गर्ने हो भने धेरैका आँखा धौलागिरि प्रथम हिमालमा पर्छन् । त्योभन्दा अझै उता देखिने पनि छ—पुठ्ठा हिउँचुली । धौलागिरिपछि पूर्वतिर आँखा मोड्दै ल्याउँदा देखिन्छ मोदित्से हिमाल । अन्नपूर्ण साउथ नामले चिनिने हिमाल चौथो नम्बरमा देखिन आइपुग्छ । घान्द्रुक हिउँचुली अन्नपूर्ण प्रथम क्रमशः देखिँदै आउँछन् ।
अन्नपूर्ण प्रथम (८०९१ मिटर) त्यही हिमाल हो जसले पोखरालाई मात्रै होइन नेपाललाई नै विश्वमा चिनायो । ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला विश्वका १४ हिमालमध्ये सबैभन्दा पहिला मानव पाइला परेको हिमाल यही हो । आरोहणका मामलामा सगरमाथाभन्दा ३ वर्ष जेठो छ अन्नपूर्ण प्रथम । फ्रान्सका नागरिक मौरिस हर्जाेग नेतृत्व टोलीले २००७ साल जेठ १९ गते अर्थात् सन् १९५० को जुन ३ तारिख यो हिमाल चढेको थियो । त्यो खुसीलाई फ्रान्सले राष्ट्रिय महोत्सवकै रुपमा आयोजना गरेर मनायो । त्यसपछि फ्रान्समा पोखरा मात्रै होइन विश्वैभरि नेपाल प्रचारित भयो ।
गंगापूर्ण अर्काे महत्वपूर्ण इतिहास जोडिएको हिमाल हो । माछापुच्छे«बाट छेलिएको यो हिमाल महिलाले आरोहण गरेको पहिलो नेपाली हिमाल हो । सगरमाथा चढ्नुअघि जुनको ताबेईका पाइलाले यही हिमालको टाकुरा चुमेकी थिइन् । तार्केकाङ, खाङसारकाङ भन्ने २ हिमाल गंगापूर्णभन्दा पश्चिमतिरै पर्छन् । पूर्वतिर भने मर्दी हिमाल छ । अनि लहरै आउँछन् अन्नपूर्ण तेस्रो, चौथो, दोस्रो, लमजुङ र सिकलेस हिमाल ।
काठमाडौंबाट आउँदा कास्की नटेक्दै तनहुँको दुलेगौंडातिरैबाट देखिन थाल्छ हिमाल । ‘पोखरामा हिमाल हेर्दिन भनेर पनि सुख पाइन्न, आउँदाआउँदै देखिन्छ’ पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर थापा भन्छन्, ‘पोखरामा हिमाल हेर्ने कुनै निश्चित प्वाइन्ट छैन । यहाँबाट उत्तर फर्किए जहाँकहीँबाट पनि देखिन्छ हिमाल ।’
कहीँकहीँ भने केही घरले छेक्लान् नत्र बाटोघाटो, पुल, मन्दिर र चौताराहरु सबैलाई हिमाल हेर्ने प्वाइन्ट भन्दिए हुन्छ । पोखराबाट देखिने एउटा हिमालको नाम पनि छ मस्र्याङ्दी । सिकलेस हिमालपछि मनास्लुभन्दा अघि छ मस्र्याङ्दी । मनास्लु आफैँमा हिमश्रृङ्खला हो ।
यो श्रृङ्खलामा मुख्य मनास्लु र मनास्लु नर्थसहितका हिमाल पर्छन् । नेपालमा जति हिमाल छन् ती सबैको नाम छैन । क्रमशः नामकरण हुँदैछ । पोखराबाटै देखिने एउटा हिमालले पछिल्लो समय नयाँ नाम पाएको छ हर्कचुली । भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङको सम्मानमा राखिएको त्यो हिमाललाई पहिला पिक ट्वान्टी नाइन भनिन्थ्यो भन्छन् थापा ।
हर्क चुलीमा गएर पनि टुंगिँदैन पोखराबाट हेर्न पाइने हिमाली सूची । त्यसपछि पनि बाँकी नै हुन्छ बौद्ध हिमाल । त्यही हो यो सहरबाट आँखा नचाउँदा पूर्वको अन्तिम सीमास्तम्भझैं खडा हुने हिमाल । नेपालमा महिला गाइड उत्पादन गर्ने थ्री सिस्टर्स एडभेञ्चर्सकी निर्देशक लक्की कार्की पोखराबाट देखिनेभन्दा नेदेखिने हिमाल थुप्रै भएकाले पोखराभन्दा वरिवरिका डाँडा र गाउँ उक्लनुपर्ने बताउँछिन् । ‘त्यही माछापुच्छ«े भिन्दाभिन्दै ठाउँबाट हेर्दा भिन्दाभिन्दै आकृतिको देखिन्छ’ लक्की भन्छिन्,‘ अन्य हिमाल हेर्न पनि पोखरा बाहिर निस्कनुपर्छ । जहाँबाट धित मरुञ्जेल हिमाल हेर्न पाइन्छ ।’
पोखरा आउने पर्यटक फेवाताल नपुग्ने सायदै हुन्छ । तर सबैले पोस्टकार्डमा देखेझैं फेवातालमा माछापुच्छे«को प्रतिबिम्ब देख्दैनन् । सामान्यतया पर्यटक तालबीचको बाराही मन्दिरतिर पुग्छन् र खोज्छन् माछापुच्छे« छायाँ । तर त्यो होइन खोज्ने ठाउँ । माछापुच्छे« छायाँ तालमा हेर्ने नै हो भने बिहानको मिर्र्मिरेतिर ड्यामसाइड पुग्नुपर्छ अनि देखिन्छ माछापुच्छ«ेको लीला । अहिलेदेखि खुल्न थालेको हिमाल अब माघ फागुनसम्मै देख्न पाइन्छ ।